Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Mbola Jirama indray !
Inty sy Nday : Mbola Jirama indray !
Manomboka amin’ny 9 ora alina no tsy azo atao ny mivezivezy andalambe na ilay antsoina hoe “couvre feu”, fa adiny roa alohan’izay kosa, raha ny alakamisy alina teo dia efa tapaka nandritra ny ora iray eo ny herin’aratra avy amin’ny Jirama nanazava ny faritra maromaro teto Andrenivohitra. Ny mitranga isaky ny amin’ny 5 ora sy sasany maraina sy ny hariva, izay tsy maharitra loatra moa, dia tsy ambara intsony, na misy akony ratsy amin’ny tontolom-piainan’ny mpanjifa aza.
Fa maninona no mitranga ny toa izany nefa tsy orana nikija, tsy varatra nirefotra, tsy rivotra nifofofofo? Re anefa fa maro amin’ny mpiasan’ny Jirama no mihiboka any ampiasana amin’izao fotoana ka tsy mody, tsy miara-monina amin’ny vady aman-janany intsony, mba hiantohana ny fikarakarana ny asa tolotra
(service) ho an’ny mpanjifa azy, “hono”.
Toa voa roa tahaka ny dakam-biriky ange isika izany e ! Ny asa tolotra (service) ho an’ny vahoaka, tsy lavorary, ny mpiasan’ny Jirama anefa mihiboka ampiasana fa tsy tafody. Tsy menatra ve ny tale jeneralin’ny Jirama sy ny ministeran’ny angovo ary ny fitondram-panjakana amin’ny ankapobeny izay mirehareha fa “manana orin’asam-panjakana antsoina hoe Jirama” nefa poaka aty ?
Elaela tsy voaresaka an-gazety ny Jirama, indrindra fa revo tao anatin’ny tontolon’ny aretina Covid 19 ny betsaka. Ny fifamaliana tamin’ny Banky Iraisampirenena momba nty saran’ny faktioran’ny Jirama no naresaka farany dia izao indray.
Aoka re ry zalahy Jirama e! Aza ampijaliana ny vahoaka fa efa mafy ny zakainy amin’ity aretina Covid 19 ity sy ny fampahantrana lavareny nobabeny izay e !